शारीरिक अपाङ्ंग विष्टलाई घर – RaptiSandesh
Home / Feature Breaking news / शारीरिक अपाङ्ंग विष्टलाई घर
दाङ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं.४ निवासी शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति केशर बहादुर विष्टका लागि घर निर्माण गरिएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष भिमबहादुर सार्कीलगायतको पहलमा विष्टका लागि वडा नं. ४ को माझ गाउँमा दुई कोठे भवन निर्माण गरिएको हो ।
बिष्टकी श्रीमतिको निधनसँगै दुई छोराहरुले छोडेपछि बिष्ट परिवारवाट एक्लीएका थिए । प्लारालाइसीस विरामीका बिष्टलाई छोराहरुले छोडेपछि बिष्ट बजार तथा गाउघरमा मागेर दैनिकी टार्दै आएका थिए । बिष्टलाई मागेर दैनिक चलाएपनि स्थायी रुपमा बस्ने घरसमेत नभएपछि स्थानीयवासीको घरमा बस्दै आएका थिए । बेसाहरा बनेका विष्टलाई घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ ले वडा कार्यालयको विपद व्यवस्थापन कोषअन्तर्गत १५ हजार नगद सहयोग गर्ने निर्णय गरेपछि घर निर्माणको काम थालनी गरिएको थियो ।
२४ पुष २०७५, मंगलवार ०५:५६
Previous: आर्थिक अभावमा बराहक्षेत्र माध्यामिक विद्यालय
Next: खोलामा अवैध उत्खनन्ः १० टेक्ट्रर नियन्त्रण